ट्राफिक बढाउने शीर्षक शीर्षक सूत्रहरू
आइतबार, जुलाई 18, 2010 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
शिर्षकहरू तपाईंको ब्लग वा वेबसाइटमा सामग्रीको सबैभन्दा कम अंकित टुक्रा हुन्। तपाईले लिनु भएको प्रत्येक वर्गले तपाईलाई भनेको छ कि एक उत्कृष्ट शीर्षकले कथा सार गर्दछ। वेबमा, यो समान सम्झौता होईन। मैले यो शीर्षक "पोष्ट शीर्षक लेख्ने" को रूपमा लेख्न सक्थ्यो… कसैले पनि यसमा क्लिक गरेको थिएन।
एउटा चीज जुन तपाइँ वेबमा व्यावसायिक प्रतिलिपि अधिकारकर्ताहरूसँग समान रूपमा फेला पार्नुहुनेछ त्यो हो कि तिनीहरूले ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न सबै समय एकै सूत्र प्रयोग गर्छन्। मेरो पोष्ट शीर्षक थोरै ठट्टा गर्ने छ ... तर तथ्य यो हो कि यी प्रविधिहरूले कार्य गर्दछन्। यहाँ दश प्रकारका पोस्ट शीर्षकहरू छन् जुन सर्फरहरूलाई तपाईंको पोष्टहरूमा क्लिक गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
कसरी गर्ने ... अझ, उत्तम, छिटो - कसरी एक उत्तम परिणामको साथ संयोजनमा एक प्रयोग गर्दै।
शीर्ष,, १०, १०० सूचिहरू - धेरै धेरै छैन ... जबसम्म तपाईं एक ठूलो पोइन्ट बनाउन कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। पाठकहरूलाई एक सूची मनपर्छ।
प्रश्न? उत्तर - सबैलाई सोध्ने प्रश्न सोध्नुहोस् र उत्तरमा स then्केत गर्नुहोस्।
आश्चर्यजनक, आवश्यक, अल्टिमेट, सुअर फायर - शब्दहरूको प्रयोग गर्नुहोस् जुन एक बलियो भावना जगाउँदछ कि यो सबै भन्दा राम्रो जानकारी सबैलाई कहिँ पनि पुग्न सक्छ।
मुक्त - हो, व्यक्ति अझै पनि एक नि: शुल्क सम्झौता मन पर्छ।
के उत्तम, प्रसिद्ध, धनी थाहा छ - तपाईं उनीहरूलाई के थाहा छ जान्न चाहनुहुन्छ, हैन?
गुप्त गाइड, फार्मूला - यदि यो एक गोप्य कुरा हो, हाम्रो जिज्ञासा हामी सबै भन्दा राम्रो हुन्छ।
द्रुत, द्रुत, समयमै - हामीसँग यी दिनहरू धेरै छैन, ती शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस् जसले अपेक्षितताहरू सेट गर्दछ कि जानकारी द्रुत रूपमा राख्न सकिन्छ।
ठुलो संख्या, ठूलो प्रतिशत - पाठकहरू ठूलो संख्यामा आकर्षित हुन्छन्।
जित, विजय, जीत - व्यक्ति हराउन घृणा गर्छन्। कसरी देखाउने तिनीहरूलाई देखाउनुहोस्!
एक खोज इञ्जिन नतीजा पृष्ठ (SERP) मा, तपाइँसँग भेट भयोaशीर्षक र वर्णन - त्यो हो! ती केवल दुई कम्पोनेन्टहरू हुन् जुन पाठकले तपाईंको साइट क्लिक वा भ्रमण गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु अघि देख्छ। शीर्षक तपाईंको बाट लिइएको हो पृष्ठ शीर्षक तत्व। यदि तपाईं एक ब्लग पोस्ट लेख्नु भएको छ भने, त्यो सामान्यतया तपाईंको ब्लग पोस्ट शीर्षक संग मेल खान्छ। तपाईंको विवरण पृष्ठ सामग्रीबाट लिन सकिन्छ, तर यदि तपाईंसँग यो छ भने मेटा विवरण ट्यागखोज ईन्जिनले प्राय: सट्टामा सामग्री लिन्छ।
के तपाईंले यसमा क्लिक गर्नुभयो? मलाई थाहा छ तपाईं चाहनुहुन्छ!
यदि तपाइँ वेबमा चारै तिर लेख हेर्नुहोस् जुन सब भन्दा ध्यान पाउँदछ, यी सम्मिश्रित शीर्षकहरू उनीहरूको शीर्षमा हुन्छन्। मैले भर्खर एक ग्राहकको लागि उनीहरूको पृष्ठ शीर्षकहरूमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धीहरूको विरूद्ध विश्लेषण गरें - र हामीले पत्ता लगायौं कि उनीहरू वास्तवमै उनीहरूको प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा धेरै राम्रो क्रममा थिए तर उनीहरूको दरहरू (सीटीआर) कम थिए।
कुञ्जी शब्दहरूको प्रभावकारी प्रयोग र सम्वन्धित पोस्ट शीर्षकहरूले तपाईंको ट्राफिकमा ठूलो असर गर्न सक्दछ। सामग्रीको रूपमा तपाईंको पोष्ट शीर्षक लेख्न यति धेरै समय खर्च गर्नुहोस्!
जुलाई,, २०१ at 19::2010। बिहान
"अचम्मको फ्री फार्मुलाले शीर्ष १० गोप्य प्रख्यात मानिसहरूलाई ठूलो नम्बरहरू उत्पादन गर्न र छिटो विन जित्न प्रयोग गर्दछ"
म कसरी गर्ने?
जुलाई,, २०१ at 20::2010। बिहान
तर प्रतीक्षा गर्नुहोस्, त्यहाँ धेरै छ! अहिले नै कार्य गर्नुहोस् र डमी नि: शुल्कको लागि कर्पोरेट ब्लगि ofको दोस्रो प्रतिलिपि पाउनुहोस् - केवल शिपिंग र प्रोसेसिंग र $ १.16.49 hand को ह्यान्डलिंग मात्र भुक्तान गर्नुहोस्!
र त्यसपछि तपाईंको पहिलो अपसेल डमीहरूको लागि ट्विटर मार्केटिंग हो त्यसपछि २०% ब्लग इण्डियानामा तपाईंको टिकट बन्द!